Iindaba-Izizathu zokusebenzisa umboniso weKhadibhodi
Abanini abaninzi beevenkile zentengiso kunye nee-boutique basebenzisa imiboniso yeplanga ukubonisa iimveliso zabo, kodwa ukusetyenziswa kweekhadibhodi pop pop nako kuyathandwa.
Uyakuqaphela iindawo zokubonisa zekhadibhodi kunye neeshelfu ezisetyenziswa ngexesha lemiboniso yorhwebo nangaphandle kwevenkile ezahlukeneyo njengendawo yokuthenga (POP). Ukuba uvula ivenkile yentengiso kwaye ucinga malunga nokuba loluphi uhlobo lwezinto zokubonisa ekufuneka uzisebenzisile, nazi izizathu ezininzi zokuba kutheni kufanele ukuba uqwalasele ukusebenzisa imiboniso yekhadibhodi engaphezulu kwento eyenziwe ngomthi. ukwenza izinto ezahlukeneyo. Unoku-odola umboniso wekhadibhodi kuzo zonke iimilo kunye nobukhulu kwaye udibanise nayiphi na uyilo olufunayo ngaphandle kwengxaki. Ukuthathela ingqalelo ukuba ikhadibhodi ebunjiweyo yinto enokuziqhelanisa nayo, inokwenziwa ukuba ihambelane neemfuno zakho kanye ngexesha elifutshane. Ngelixa umthi unokumiswa ngobukhulu obahlukeneyo, inkqubo iyafumaneka kuphela kwithiyori njengoko oomatshini ngabanye kunye nezixhobo zokusika ziya kufuneka ukwenza imveliso yokugqibela. Inkqubo yokuvelisa ayinzima ngakumbi kodwa ibiza kakhulu ngokunjalo.
Iyaphatheka ukuba ufuna ukutshintsha ubeko kunye nokubonakala kwevenkile yakho ngokuhambisa izinto ngapha nangapha, ungakwenza oko wedwa kuba izibonisi ezirhabaxa zilula kwaye ziyahanjiswa. Xa unemiboniso yeplanga, kuya kufuneka uqeshe uncedo ngalo lonke ixesha ucinga ngokutshintsha useto lwevenkile yakho. Ngaphaya koko, okoko ukuboniswa okuphezulu kwe-counter e-Abbotsford BC kuyasongwa, ungazigcina ngokulula okanye ubazise kwezinye iindawo zentengiso okanye imiboniso yendlela.
Ixabiso eliphantsi Njengomnini weshishini we-newbie, awunakukwazi ukuchitha imali eninzi ekuqaleni. Khawufane ucinge ukuba umboniso omnye wokhuni ungabiza malini kwaye uphindaphinde oko kwinani leeshelfu zokubonisa okanye indawo yokuma oya kuyidinga. Umboniso ophambili we-counter e-Abbotsford BC ungabizi kwaye unikezwe ukuba unokubonelela ngento yonke enokuthi iboniswe ngomthi, ukuyisebenzisa kunokuba yeyona ndlela ineendleko. Iyaguquguquka Unokutshintsha ngokulula uyilo olupheleleyo lweemiboniso zekhadibhodi ukuze zilungele umxholo wevenkile yakho kangangexesha elithile ngaphandle koncedo lobungcali. Umzekelo, ngexesha lentengiso yosuku lwe-valentine, unokugubungela zonke iindawo zakho zokubonisa ezinephepha elibomvu okanye ukongeza imifanekiso yoyilo lwentliziyo ukuze ulungele umsitho. Ukuba usebenzisa ukubonakaliswa kweenkuni, ukuzitshintsha kuthetha ukuqesha uncedo lobuchwephesha kunye nokuchitha isixa esikhulu.
Ngokunikwa izibonelelo ezininzi ezichazwe apha ngasentla, unokuxela ngokulula ukuba imiboniso yekhadibhodi enokuba luncedo njani kwishishini lakho. Cinga ngazo zonke ezi zinto njengoko usenza ingqondo yakho, ukuze ungazisoli ekugqibeleni.